ပြည်ရွှေဆံတော်မှာ နှစ်ကိုယ်တူ ဘုရားဖူးခဲ့ကြတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံ - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/ပြည်ရွှေဆံတော်မှာ နှစ်ကိုယ်တူ ဘုရားဖူးခဲ့ကြတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံ
ပြည်ရွှေဆံတော်မှာ နှစ်ကိုယ်တူ ဘုရားဖူးခဲ့ကြတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံ
“ဥပါယ်တံမျဉ်” “မုဒြာခေါ်သံ” အစရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီ နဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ပရိသတ်တွေကို အကောင်းဆုံးသော အနုပညာတွေချည်းပြည်ရွှေဆံတော်မှာ နှစ်ကိုယ်တူ ဘုရားဖူးခဲ့ကြတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံပဲ ချပြဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့နှစ်ဦးက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်အတွက် နယ်တွေလှည့်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံနေကြတာဖြစ်ပြီး၊ Fan Meeting အတွက်လည်း ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇဏ်ခီကတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရင်း ချစ်ဇနီးနဲ့အတူ ပြည် ရွှေဆံတော်ဘုရား အတူဖူးခဲ့တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် Romantic ဆန်ပြီး ကြည်နူးစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘုရားဖူးပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဇဏ်ခီကတော့ ” ပြည်ရွှေဆံတော်မှာ ဘုရားဖူးပြီး ရန်ကုန်ကိုပြန်လာနေပါပြီ.. Fan meeting အတွက်လည်း စပြီးဆွေးနွေးနေကြပါပြီဖြစ်ကြောင်း။ 😊❤️” ဆိုပြီး သူတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယေက်ရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်မျာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အချစ်တွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေတာပါနော်။
အခက်ခဲတွေကနေ နှစ်ကိုယ်တူကြိုးစားရင်း အောင်မြင်လာတဲ့ အချစ်တတ်ဆုံး စုံတွဲလေး…
ခရစ္စတီးနားခီကတော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာအသစ်တွေ ဆက်ပြီးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး “Now and Ever ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် နယ်ခရီးတွေ ထွက်ဖြစ်နေတာပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို Romantic ဆန်တဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုသဘောကျရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Source;Zenn Kyii’s Facebook
Photo;Kaung Khant Soe , Credit ; momolay
“ဥပါယျတံမဉျြ” “မုဒွာချေါသံ” အစရှိတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ရုပျရှငျကားတှနေဲ့ မွနျမာပရိသတျတှေ ရဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခွငျး ခံခဲ့ရတဲ့သရုပျဆောငျ ဇဏျခီ နဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီ ဇနီးမောငျနှံကတော့ ပရိသတျတှကေို အကောငျးဆုံးသော အနုပညာတှခေညျြးပဲ ခပြွဖို့ကွိုးစားနကွေတာပါ။ လတျတလောမှာတော့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့နှဈဦးက သူတို့နှဈယောကျရဲ့တတိယမွောကျရုပျရှငျအတှကျ နယျတှလှေညျ့ပွီး ပရိသတျတှနေဲ့ သှားရောကျတှဆေုံ့နကွေတာဖွဈပွီး၊ Fan Meeting အတှကျလညျး ပွငျဆငျနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဇဏျခီကတော့ အလုပျကိစ်စနဲ့ ခရီးထှကျရငျး ခဈြဇနီးနဲ့အတူ ပွညျ ရှဆေံတျောဘုရား အတူဖူးခဲ့တဲ့အကွောငျး လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ Romantic ဆနျပွီး ကွညျနူးစရာတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ဘုရားဖူးပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဇဏျခီကတော့ ” ပွညျရှဆေံတျောမှာ ဘုရားဖူးပွီး ရနျကုနျကိုပွနျလာနပေါပွီ.. Fan meeting အတှကျလညျး စပွီးဆှေးနှေးနကွေပါပွီဖွဈကွောငျး။ 😊❤️” ဆိုပွီး သူတို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈယကျေရဲ့ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျမြာ ဝမြှေပေးထားတာပါ။ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ အခဈြတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့နှဈဦးရဲ့ပုံရိပျတှကေတော့ အရမျးကို ကွညျနူးဖို့ကောငျးနတောပါနျော။
အခကျခဲတှကေနေ နှဈကိုယျတူကွိုးစားရငျး အောငျမွငျလာတဲ့ အခဈြတတျဆုံး စုံတှဲလေး…
ခရစ်စတီးနားခီကတော့ လတျတလောမှာ အနုပညာအသဈတှေ ဆကျပွီးပွုလုပျနတောဖွဈပွီး “Now and Ever ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအတှကျ နယျခရီးတှေ ထှကျဖွဈနတောပါ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး အရမျးကို Romantic ဆနျတဲ့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီ ရဲ့ ပုံရိပျကလေးတှကေိုသဘောကရြငျ share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Photo;Kaung Khant Soe
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် ရဲ့ ဟောပြောပွဲ ( အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ မှတ်သားထိုက်ပါတယ်)
Shwe FM ရဲ့ ဂီတဆုခြီးမွှငျ့ပှဲမှာ သီခငျြးတောငျးဆိုမှု အမြားဆုံး အမြိုးသမီးဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ အိုငျးရငျးဇငျမာမွငျ့